We She Me: ကင်ဘာရာ ခရီးစဉ် - Floriade
Anonymous - 10/6/08, 9:15 PM
I miss "Canberra" mate...:D
nu-san - 10/7/08, 2:01 AM
Andy ရေ.. မိသားစုတွေ ပျော်နေတာ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးအပျော်ကူးတယ်.. ပန်းတွေကလည်း လှလိုက်တာ... သမီးလေးက ပန်းတွေကြားထဲမှာပျော်နေပုံပဲ.. ဂါဝန်လေးနဲ့ဆိုတော့လည်း မြတ်နိုးလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းသား.. ဓာတ်ပုံတွေလည်း အားလုံးကြည့်ပြီးသွားပြီ။ သားလေးက အပြင်မှာ ကလေးတို့မေမေချီထားတော့မှအတော်လေးထွားတာ သတိထားမိတယ်.. ကလေးတို့မေမေကတော့ လက်မောင်းတွေ အတော်ကြီးနေရောပေါ့.. :)
Ko Boyz - 10/7/08, 3:08 AM
ကိုအန်ဒီတို့များ ရေးလိုက်ရင် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေချည်းပဲ...။ ခုလဲ မိသားစုလိုက် ခရီးထွက်တာ ဖတ်လိုက်ရတော့ ကြည်နှုးစရာလေး...။ စလုံးမှာတော့ အဲလို family life ရဖို့၊ မိသားစုလိုက် ခရီးဝေး ထွက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ရှားမယ် ထင်တယ်နော်...။ ပို့စ်ကောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ....။
khin oo may - 10/7/08, 3:45 AM
Moe Cho Thinn - 10/7/08, 7:46 AM
ကျူးလစ်ပန်းလေးတွေက လှလွန်းလို့ လုပ်ယူထားတဲ့ ပန်းအတုလို့တောင် ထင်ရတယ်။ ဒီလို သာယာလှပတဲ့နေရာကို မိသားစုနဲ့သွားရတော့ ဘယ်လောက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းလိုက်မလဲ။ မုဒိတာ ပွားသွားတယ်။
PTi - 10/7/08, 7:44 PM
ပန်းတွေကလှလိုက်တာ.. ဓာတ်ပုံရိုက်လို့တော်တော်ကောင်းမယ်နော်... ဟုတ်တယ်.. အမမိုးချိုးသင်းပြောသလို မိသားစုနဲ့သွားလို့ တော်တော်ကောင်းမယ့်နေရာလေး...
Ei Thi - 10/8/08, 5:10 PM
Glad to hear that, life is complete for you bro. Cheers!
မဇနိ - 10/8/08, 5:45 PM
ပန်းလေးတွေလည်း လှတယ်။ ကလေးလေးတွေလည်း ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပန်းပုံလေးတွေလည်း တိုရှည်လုပ်ထားလိုက်အုံးမယ်။ ညညအခန်းကူးချင်နေတဲ့ ပန်းရောင်မလေးက ပိုလှလှလာပြီနော်။
Nay Nay Naing - 10/9/08, 1:31 PM
ပန်းတွေကို ကြည့်ဖို့အတော်လေး ကြိုးစားလိုက်ရတယ်.. မိသားစုပုံတွေနဲ့ပန်းပုံတွေကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ်..
စိတ်ထဲမှာ.. သမီးလေးက ကြီးလေ ပိုချော ပိုချစ်ဖို့ ကောင်းလာလေလေပဲ..
သားလေး ရဲ့ မျက်တောင်ရှည်ရှည် ကော့ကော့လေးတွေကိုလည်း အသေအချာမြင်အောင် ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်. အဲဒီဓာတ်ပုံလေးကို ဓာတ်ပုံရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြောင့် သတိထားမိပြီး အသေအချာကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ..
င်္Flicker မှာ ပုံတွေတင်တဲ့အခါမှာ အဲဒီလိုပဲ သင့်တော်တဲ့ ခေါင်းစဉ် လေးတွေ တပ်ပြီးတင်ရင် ကြည့်သူတွေကို ပိုပြီး စွဲဆောင်နိုင်သလိုပဲ.. ပုံတင်ရတဲ့ သူတွေအဖို့ တော့ အလုပ်ပိုရှုပ်၊ အချိန်ပိုကုန်မယ် ထင်တယ်..
Andy Myint - 10/13/08, 8:51 AM
Yeah, you should, STRIKE.
သမီးက ပန်းတွေ ကြားဆို သိပ်ပျော်တာ မနုစံ။ သားက အ၀တ်ထုပ်ထဲမှာ ဆိုတော့ မသိသာဘူး။ အပြင်သွား အင်္ကျီ ဝတ်လိုက်တော့မှ သိသာတာလေ။ အခုတောင် ၈ ကီလို နီးနီး ရှိနေပြီ။
စင်္ကာပူမှာလည်း ရနိုင်ပါတယ် Ko Boyz။ စင်္ကာပူမှာ အမျိုးတွေ ပိုများတော့ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Family Life ထက် ပိုတယ်ပေါ့။
ဟုတ်တယ် ဖယောင်းဖတ်လေးတွေလိုပဲနော် မချိုသင်း
အင်း မိသားစုနဲ့သွားသွား…. ကိုပီတိ သွားချင်သလို သွားသွား… ဟက်ဟက်
Thanks, Ei Thi. Not Really though. I just started my life in AU from scratch.
ဟုတ်တယ် ညီမနေနေရေ…သားလေးက လူချော။ စိတ်လိုရင်လည်း ဓါတ်ပုံတွေမှာ ခေါင်းစဉ် တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဒီအတိုင်း တင်လိုက်မိရင် ကြည့်ရတဲ့သူက ဘာကြည့်နေမှန်း မသိရင် သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။